‘कन्ट्रयाक्ट किलर’ प्रयोग गरी आफ्नै श्रीमानको हत्या, यस्तो छ रहस्य ! – The Public Today
‘कन्ट्रयाक्ट किलर’ प्रयोग गरी आफ्नै श्रीमानको हत्या, यस्तो छ रहस्य !
विजय कुमार सिंह भदौ ११, २०७६ ७:२९ am
महोत्तरी, भदौं ११ गते । संगै जीउने भन्दै ढेड दशक अघि महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका– ३, गौरीडाँडाका सरोज भनिने श्रवन थापाले धनुषाको मिथिला नगरपालिका बाहुनमाराकी पूजा थापाको सिउँदो सजाएर घर भित्र्याए ।
सरोजले श्रीमती पूजा, छोरा प्रज्वल, छोरी स्मारिका र वुवाआमाको खुसीका लागि विरानो भूमी मलेसियामा चार वर्ष पसिना बगाए । सरोजले कहिले सोचेका थिएनन् होला कि आफ्नो श्रीमती नै आफ्नै मृत्युको कारण बन्न सक्छ भनेर । तर, उनले सोचेको जस्तो भएन । श्रीमती पूजाले सुपारी दिएर भाँडामा अपराधी समूह प्रयोग गरी उनको हत्या गराएको खुलासा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले गरेका छन् । पूजाले आफ्नो श्रीमान् सरोजको हत्या गरेको सुनेपछि बर्दिबासबासी अच्चमित भएका छन् ।
साँढे चार लाख खर्च गरेर श्रीमान्को हत्या
‘गम्छामा ढुङ्गा बाँधेर सरोजको टाउको पछाडि हिर्काएर हत्या गरेको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा देखिएको छ,’ एसपी अधिकारीले भने, ‘साँढे चार लाखमा सरोजको ज्यान मार्ने डिल भएको खुलेको छ । हत्याको अभियोग लागेकाहरुले अढाई लाख नगद लिइसकेको उनले बताए । गतअसार ३१ गते सरोजको हत्या भएको थियो । उनको शव विपी राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिका–३, स्मृतिपार्क नजिकै फेला परेको थियो । पूजाले आफ्नी बहिनी कोपिलाका देवर प्रमोद सिंहमार्फत पाँच जनाको अपराधिक समूहलाई सुपारी दिएर श्रीमान्को हत्या गराएको प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सरोजको हत्यामा संलग्न रहेका मध्ये चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ परेका छन् भने अरु अझै फरार छ । पक्राउ परेका चार जनालाई प्रहरीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।
पक्राउ परेका चारजनालाई सार्वजानिक गर्दै प्रहरी । तस्वीर : द पब्लिक टुडे
पक्राउ पर्नेमा सर्लाही जिल्ला, धनकौल गाउँपालिका–३ हरकटवाका २७ वर्षीय प्रमोद सिंह, वडा–२ बस्ने २७ वर्षीय मुकेश साह, रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिका–६ बखरी टोलका ३३ वर्षीय जिला भन्ने श्रीनारायण महरा र ४६ वर्षीय टिआई सहनी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका डिएसपी निशान थापाले जनाए । घटना अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले ६० जना भन्दा बढीसंग सोधपुच्छ गरेका थिए । शुक्रवार इप्राका बर्दिवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आरोपीलाई हेर्न गाउँनै उर्लिएका थिए ।
१२ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी
सरोजको हत्या विरुद्धमा उनका काका टंकविक्रम थापाले उनका श्रीमती पूजा, सासु लक्ष्मी बस्नेत, साली र अन्य पाँच जना व्यक्तिहरु गरि १२ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् । घटनाको २१ दिनपछि सरोजका श्रीमती, सासु र सालीहरु फरार भएका छन् । अनुसन्धानमा आफन्तकै हात रहेको खुलेपछि उनीहरु फरार भएका हुन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी), प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी, इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबाससहितको प्रहरी टोलीले महिना दिन लगाएर सरोजको हत्याको बारेमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।
इप्राका बर्दिवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आरोपीलाई हेर्न आएका स्थानियहरूको भीड । तस्वीर : द पब्लिक टुडे
दुर्घटनाको रुप दिएर हत्या
गत असार ३१ गते अन्दाजी साँढे १० बजे रातीको समयमा सरोज भन्ने श्रवण थापा स्कूटीसंगै पल्टेको अवस्थामा भेटिए । टाउकोबाट रगत बगिरहेको थियो । अस्पताल पु¥याउँदा उनको मृत्यु भइसकेको थियो । ‘उनको मृत्यु सवारी दुर्घटनाबाट देखिनथ्यो । हामीले दुर्घटनाकै दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान सुरु गयौं,’ एसपी अधिकारीले भने, ‘पोस्टमार्टमको रिपोर्टपछि घटना रहस्यमय जस्तो लाग्यो । हत्या भएको हुन सक्ने कोणबाट अनुसन्धान मोडियो ।’ त्यसपछि हत्याको रहस्यहरु खुल्दै गयो । स्थानीय प्रहरीले मात्र नभियाउने भएपछि प्रदेश प्रहरी, संघीय प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) बाट प्रहरी खटिए ।
रुपैंया हात पार्न श्रीमान्को हत्या
सरोज र श्रीमती पूजासंग बेलाबेलामा घरायसी विवाद भइरहन्थ्यो । पछिल्लो समय घर बनाउन सरोजले करीब २२ लाखमा जग्गा बिक्री गरेका थिए । त्यसपछि झन उनीहरु बीच विवाद चर्किएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ । श्रीमतीले जग्गाको रकम हात पार्ने र मौज गर्ने भन्दै श्रीमान्को ज्यान मार्ने योजना बनाउन थालिन् । पुजाले आफ्नी बहिनी कोपिलाका देवर सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–३ हरकटवाका २७ वर्षीय प्रमोद सिंहलाई भाँडाका अपराधी खोज्न लगाए । प्रमोदले आफ्ना साथी मुकेश साहलाई खटाएर सरोजको हत्या गर्ने योजनमा संलग्न भए । प्रमोद र मुकेशबीच साथीको सम्बन्ध छ । प्रमोद र मुकेश मिलेर पूजाले बनाएको योजना सफल पार्न रौतहटको गढीमाई नगरपालिका– ६ बखरी टोलका ३३ वर्षीय जिला भन्ने श्रीनारायण महरासंग सम्पर्क गरे । मुकेशको गाउँमा परिवारीक सम्बन्ध छ, श्रीनारायणको । उनी कहिले काँही रौतहटबाट सर्लाही आउँजाउ गर्दा श्रीनारायणसंग मुकेशको घनिष्टता बढेको हो । श्रीनारायणले आफ्नै गाउँका टिआई सहनी र अन्य एक जनासंग मिलेर सरोजको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । टिआई सहनी विगतमा भूमिगत समूहमा संलग्न रहेको प्रहरीको भनाई छ ।
पुजाले आफ्नी बहिनी कोपिलाका देवर सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–३ हरकटवाका २७ वर्षीय प्रमोद सिंहलाई भाँडाका अपराधी खोज्न लगाए । प्रमोदले आफ्ना साथी मुकेश साहलाई खटाएर सरोजको हत्या गर्ने योजनमा संलग्न भए । प्रमोद र मुकेशबीच साथीको सम्बन्ध छ ।
प्रमोद पक्राउपछि खुल्यो रहस्य
‘खोज्दै जाँदा सरोजले जग्गा बिक्रगरेको र केही पैसा भएको थाहा पायौं । केही पैसा पत्नीसँग भएको र अरू ठेगान नभएको खुल्यो’, अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीले भने, ‘पति र पत्नीको झगडाबीच जब ठूलो पैसा छैन भन्ने थाहा भयो, त्यहींबाट अनुसन्धान सुरु ग¥यौं ।’ सरोजको फोन सम्पर्क सालीका देवर प्रमोदसंग भएको र घटना घटेको दिन पक्राउ परेकाहरु बर्दिबास आएको लोकेसनहरु प्रहरीले फेला पारे । प्रमोद पक्राउ परेपछि पूजाले श्रीमान्को हत्या गर्न भाडाको अपराधी प्रयोग गरेको खुलासा भयो ।
अनुसन्धान गर्न प्रहरीले बनाएको लिङ्क
बाटो ढुकेर सरोजको हत्या
सरोजको हत्या भएको दिन उनी भरखरै खरिद गरेको स्कूटी नामसारी गराउन जनकपुर गएका थिए । मृतकका काका टंकविक्रम थापाका अनुसार, श्रीमान् घरमा नरहेको मौका छोपेर उनकी श्रीमतीले छोरा प्रज्वललाई गौरीडाँडास्थित फुफुको घरमा छाडिदिए । छोरी स्मारिकालाई लिएर धनुषास्थित बाहुनमारा आफ्नो माइती गइन् । त्यही दिन माइतमा आमा लक्ष्मी बस्नेतसंग मिलेर लोकल भाले बली दिएर रातु पूजा गरिन् । पूजा र उनकी आमा कुखुराको मासु लिएर बर्दिबास फर्किन् तर, छोरीलाई माइतमै छाँडेर आइन् । श्रीमती र सासु लक्ष्मीले सरोजलाई लोक कुखुराको मासु र रक्सी खुवाए । राती छोरी विरामी भएर सिरियस भएको भनेर बाहुनमाराबाट सरोजको सालीले फोन गरेको खबर पाएपछि सरोज स्कुटी लिएर बाहुनमारा तिर लागे । बाहुनमारा जाँदै गर्दा बर्दिबास–३, स्मृति पार्क नजिकै उनलाई बाटो छेकेर श्रीमतीले भाँडामा ल्याएका अपराधीहरुको प्रयोग गरेर हत्या गराए । ‘सरोजको टाउको पछाडी ढुङ्गाले हिर्काएर हत्या गरे,’ प्रहरी भन्छन् ।